कोभिड-१९ले झन्डै परिवर्तन गरेको विश्व फुटबल इतिहास : अविस्मरणीय फुटबल जगतको १२ महिना... | एक्सप्रेस | GNN Nepal GNN Nepal कोभिड-१९ले झन्डै परिवर्तन गरेको विश्व फुटबल इतिहास : अविस्मरणीय फुटबल जगतको १२ महिना... | एक्सप्रेस | GNN Nepal
पुष २७ गते, २०७७ १८:५५ मा प्रकाशित
काठमाडौँ । फुटबलको उत्पत्ति कहाँबाट भयो यसको पछाडि थुप्रै रायहरू छन् । कोही भन्छन् खुट्टाले हिर्काएर बल फालिने भएकाले यसलाई फुटबल भनिएको हो । यद्यपि यसको वास्तविक नाम वा स्रोत भने विश्व जगतमा अझै पनि अनविज्ञ नै छ ।
यसमा फेडरेशन इन्टरनेशनल डी फुटबल संघ (फिफा) को तर्क भने केहि बेग्लै छ । फिफाका अनुसार फुटबल सुजुको एक चिनियाँ खेल हो। यो खेल चीनको ह्यान राजवंशको समयमा विकसित भएको थियो। यो खेल क्याम्रीको नाममा जापान असुका राजवंशको शासनको बखत खेल्ने थियो।
यो खेल लामो समयको लागि विकसित गरिएको हो। कालान्तरको इ.वि संवत् १५८६ मा ग्रिन ल्यान्डमा जोन डेभिस नाम गरेको जहाजका कप्तानका कार्यकर्ताहरूले यो खेल खेलेका थिए।
फुटबल इतिहासको केहि रोचक तथ्यहरू
१) सन् १४८६ मा फुटबल खेल भन्दा बढी बल भएको भनिएको थियो । यो कथन सेन्ट अल्बान्सको पुस्तकमा समावेश छ।
२) सन् १५२६ मा इङ्गल्यान्डका राजा हेनरी अष्टमले पहिलो पटक यस्तो जुत्ता बनाउन आदेश दिएका थिए, जुन लगाएर फुटबल खेल्न सकियोस् ।
३) सन् १५८० मा, सर फिलिप सिड्नीको कविताले महिलाहरूले खेल्ने विशेष प्रकारको फुटबलको वर्णन गर्दछ।
४) १६ औं र १७ औं शताब्दीको आरम्भमा, यो खेल पहिलो पटक लडाइँको भावनालाई खेलमा उतार्न खेलिएको थियो । यसको लागि, खेलाडीहरूले मैदानमा दुई विपरीत टाउकोमा झाडीहरू राखेर गोल पोष्टहरू बनाए। त्यस समयमा आठ वा बाह्र गोलको एक खेल खेलाइएको थियो।
५) मध्य युगदेखि नै फुटबलमा प्रतिबन्धको संकट सदैव आएको छ।
६) सन् १९२१ मा महिलाहरूलाई अङ्ग्रेजी र स्कटिश फुटबल लीगमा खेल्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। यद्यपि, यो प्रतिबन्ध १९७० मा फेरि हटाइयो।
७) ती महिला जो फुटबलमा आफ्नो भविष्य बनाउन चाहन्छन्, उनीहरूलाई अझै पनि धेरै कठिनाइहरूको सामना गर्नुपर्दछ।
२० औं शताब्दीमा फुटबल
२० औं शताब्दीमा, खेलकुदलाई नियमित रूपमा हेरचाह गर्न सक्ने एउटा संस्थाको आवश्यकता पर्‍यो। सोही कारण अङ्ग्रेजी फुटबल संघद्वारा एक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको संस्थाको उत्पत्ति भयो।
जसको फलस्वरूप फ्रान्स, बेल्जियम, डेनमार्क, नेदरल्याण्ड, स्पेन, स्विडेन र स्विजरल्याण्डले सात प्रमुख युरोपेली देशहरूसँग मिलेर १९०४ मा फेडरेशन अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल संघ (फिफा) गठन गरियो । जसले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल जगत्लाई एक पार्नेमा सधैँ तत्पर रहन्छ ।
वर्तमानको विश्वमा फुटबल मात्रै यस्तो खेल हो , जसलाई हेर्ने कुनै भाषा, धर्म, वर्ण, संस्कृतिको आवश्यकता पर्दैन । यसका धेरै प्रतिस्पर्धाहरू राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा हुन थालिसकेका छन्।
यस बाहेक, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा धेरै फुटबल क्लबहरू स्थापना गरिएका छन्। फुटबल विश्व कप यस खेलको सब भन्दा ठुलो खेल हो। आजको विश्वमा मेस्सी, रोनाल्डिन्हो, रोनाल्डो, नेएमार, इत्यादि जस्ता धेरै नामहरू फुटबलको पर्यायवाची शब्द मानिन्छन् । आजका युवाहरू फुटबलको बारेमा सचेत भइसकेका छन् । आजका करोडौँ युवाहरु फुटबल खेललाई आफ्नो करियर बनाउन चाहन्छन् ।
२०२० कोभिड-१९ को अर्थात् अदृश्य भाइरसको वर्ष । २०२० भरि विश्व घर भित्र थुनियो । हामीलाई मनोरञ्जन दिने माध्यमहरू विस्थापित भए । कलाकारका रङ्गमञ्चमा गुन्जिने धुन शून्य भयो भने रंगशालामा खेलाडीले खेल जित्दाको आइकॉनिक क्षण विलीन भए । तर पनि उनीहरूले हार मानेनन् र केहि महिनाको घर बसाई पछि मैदानमा उत्रिए ।
सामाजिक दुरी र विश्व स्वास्थ्य संगठनले लागु गरेका जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्दै कलाकारहरू विश्वलाई खुसी पार्ने दौडमा निस्किए भने खेलाडीहरू बिना दर्शक पनि खेल खेल्न स्टेडियम झरे ।
सन् २०२० साँच्चै नै खेल इतिहासको लागी कालो दिन साबित भयो । तर पनि कोभिड महामारीसँगै हिडेंको खेल जगत् मा यो वर्ष निकै रोमाञ्चक प्रतिस्पर्धा पनि भए जसलाई फुटबल समर्थकहरूले आजीवन सम्झने छन् । चाहे त्यो बार्सीलोना बार्यन म्युनिखसंग ८-२ ले पराजित भएको क्षण होस् या १०० औं खेलाडीलाई कोरोना लागेर महत्त्वपूर्ण म्याच छुटाएका क्षण । सधैँ स्मरण रहनेछ ।
यो वर्ष विजय र त्रासदीको थियो । यो वर्ष अनौंठो र उदात्त, भयानक र प्रफुल्लित कारी भयो । फुटबलका अहिलेसम्मकै एक महान् खेलाडी डिएगो म्याराडोनाको ६० वर्षको उमेरमा हृदयाघातका कारण मृत्युले त फुटबल जगत् स्तब्ध नै बन्यो ।
यद्यपि, आज यहाँ कलाकारको भन्दा पनि खेलाडीहरूको चर्चा गरिने छ । जसले दर्शक र उनीहरूको हुटिङबाट निस्कने बुलन्द आत्मविश्वासको बिना पनि खेले र विश्वका करोडौँ खेल प्रेमीलाई मनोरन्जित पारे ।
यसर्थ पछिल्ला १२ महिनामा कोरोनासंगै बगेको फुटबल जगत्लाई परिभाषित गरिएका चित्रहरू हेरौँ।
बलको १२ महिना फोटोमा
फुटबल … रोकिन्छ
जस्टिस फर जर्ज फल््योड
प्रिमियर लिग फिर्ता
बेलिंगहम सिटि बुंडेस्लिगामा प्रवेश
एक ३० वर्षको प्रतीक्षा समाप्त, लिभरपुलले तीन दशकपछि प्रिमियर लिग जित्छ
लीड्स युनाइटेड प्रतिज्ञा गरिएको भूमिमा पुग्छ
डेभिड सिल्वाले प्रिमियर लिगलाई बिदाइ गरे
म्याकलफिल्ड टाउन विघटन भयो
आर्सेनलले एफए कप जित्यो
फुलहम प्रमोट भयो ।
एन्ड्रिया पिरलोले आफू कहिल्यै म्यानेजर नहुने दाबी गरे । तर अगस्टमा उनले मोरिजियो सारिलाई जुभन्टस हाकिमको ठाउँमा बदली गरेका छन्।
आरबी लाइपजिग च्याम्पियन्स लिग सेमीफाइनलमा
बायर्न ८ – २ बार्सिलोना, साँच्चै ?
लियोनले म्यानचेस्टर सिटिलाई नक आउट गर्यो ।
लुकाकू नायकबाट शून्यमा
कोमान राम्रो खेल्छन् ।
“म उसलाई लेवान-गोल-स्की भन्छु”
लियोन शासन सर्वोच्च
सेन्ट मेरीमा सन
ब्राइटन किक अन
एस्टन भिल्ला ७-२ लिभरपूल, हो यो पनि भएको थियो…….
संसारले माराडोनालाई शोक गर्दछ
नम्बर १० बाट अर्कोमा
रोनाल्डोले फेरि क्याम नोउमा जाँदु देखाए
“तपाईंले मलाई याद गर्नुभयो?
ब्रुनो फर्नांडीस संयुक्त राज्यमा अवतरण
ASM ..उडान गर्न जारी छ ?
भदौ १५ सम्म लम्बिदै उपत्यकाको निषेधाज्ञा